Damaca Badd-doonka Itoobiya Iyo Damanaanta Soomaalida. Qalinkii: Cali Cabdi Coomay - FOOLAAD MEDIA
Home » Aragtida Dadweynaha » Damaca Badd-doonka Itoobiya Iyo Damanaanta Soomaalida. Qalinkii: Cali Cabdi Coomay
Qoraa Cali Cabdi Coomay
May ahayn wax lala yaabo codsigii ay Itoobiya hordhigtay madaxweynihii Faransiiska ee ahaa in loo tababaro ciidan badda iyo hadalkii dhawaan uu jeediyey taliye ku xigeenka ciidanka difaaca Itoobiya oo ahaa in dalka Itoobiya yahay wadan weyn islamarkaana leh ciidamada ugu xooga badan Afrika, sidaas darteedna Ra’isal wasaare Abiy waxaa uu keeney qorshe lagu dhiso ciidamada Badda dalkaan. ” Anagoo og in dalka Itoobiya aanu laheyn Badd, laakiin waxaan aad ugu dhownahay baddda Cas iyo Badweynta Hindiya. Hadda waxaan markhaati ka nahay in dalal badan muujinayaan rabitaankooda inay ciidamo badeed ka dhisaan Somalia sida Jabuuti, Eritrea iyo Puntland, marka anaga maxaa diidaya anagoo 60KM u jirna badaha Soomaaliya.”
Janaraal Burhanu wuxuu ugu dambayantii sheegay. “Hogaanka Raysalwasaare Abiya Axmed waxa uu leeyahay aragti fog oo ah in la dhiso ciidamo badeed oo xoog badan kuwasoo ku hubeysan qalabka casriga ah.”